Ụbọchị My Pet » Ihe Mere I Kwesịrị Mkpapụ a Girl Na a Dog
site Sebastian Harris
Ihe Mere I Kwesịrị Mkpapụ a Girl Na a Dog
emelitere ikpeazụ: Jan. 17 2021 | 3 min agụ
N'oge m nọ na-enwe mmekọrịta dị ịtụnanya nwaanyị. Ọ bụ mara mma, ọgụgụ isi na nwanyị. Ọ bụ ihe niile m nwere ike jụọ maka. Naanị ihe na mgbe ụfọdụ annoys m bụ ya obere nkịta na mgbe niile na-amalite na-ekwo ekworo, mgbe ọ bụla m susuo ma ọ bụ cuddle ya.
Echere m, Na-amasị m nkịta na m na-enwe na a nkịta na-adịgide ndụ mgbe m nne na nna si ebe ma m ka na-annoyed site na eziokwu na m na-apụghị susuo ya na-enweghị risking a tinnitus si barking ya nkịta. M ọbụna malitere asị na ntakịrị ihe, ruo mgbe m ghọtara na ọ pụrụ ịbụ na ndị isi anyị na-enwe obi ụtọ ná mmekọrịta.
Amaara m na ọ na-ada kpam kpam crazy ma ihe m chere banyere àgwà na àgwà nke na enyi m nwanyị, ihe m ghọtara na ya nkịta nwere ike na-enwe mmetụta ya ọtụtụ ihe karịa ka m chere.
M ọbụna chere otú m nwanyị ga-abụ ma ọ bụrụ na ọ ga-bụghị a zụlitere n'ụzọ na-ekwe ya na-elekọta ihe ọzọ. M wee ọgwụgwụ na n'agbanyeghị na ọ ka na-annoys m mgbe ya nkịta anaghị akwụsị barking, M nwere na-ekele ya maka zuru okè mmadụ ọ nyeere ya aka. Emechara m chọpụta na ada na ịhụnanya na a girl onye a na nkịta e mkpebi kasị mma m nwere ike mgbe mere.
Ọ Mụtara weghara Ibu Ọrụ
Mgbe ụfọdụ, m nwere mmetụta na ụmụ n'oge bulie ha ndị nne na nna, kama ịlụ zụlitere nne na nna ha. N'ihi nke na ha na-adịghị na-ohere ịzụlite a n'echiche nke ibu ọrụ, n'ihi na ọ dịghị onye na-akụziri ha ihe ọ pụtara ịbụ maka ihe ma ọ bụ onye.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na nwa agbọghọ ahụ na ị na-akpa nwere nnọọ enweghị uche ọrụ, ọ eleghị anya, mgbe nwere nkịta. A nwanyị na-ọkọride na a nkịta na-akpaghị aka na-amụta iji weghara ọrụ maka ihe ọzọ.
O nwere na-eje ije na ya, o nwere na-eri nri ya na ọ na-ewe ya na unọ unam usọbọ mgbe ọ bụ na-arịa ọrịa. All ihe ndị na-achọ a n'echiche nke ibu ọrụ. Mgbe ị na-akpa otu nwa agbọghọ onye nwere uche a nke ọrụ maka ihe ọzọ, ị nwekwara ike ịbụ mara mma n'aka na ya echiche nke ibu ọrụ bụ ọbụna ibu mgbe ọ na-abịa mmadụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere mgbe malite a na ezinụlọ ya na a nwaanyị, ị kwesịrị ị na mma ejedebe na a mmekọrịta a girl onye nwere uche ọrụ.
Ị pụrụ ijide n'aka na o nwere a Caring Personality
Ị maara na ọnụ ọgụgụ otu ihe na-eme ka ndị ikom obi ụtọ na mmekọrịta? Emela, nọmba otu ihe anyị na-atụ anya ga-esi n'ime a mmekọrịta nwere ihe ọ bụla na-eme mmekọahụ. Ihe anyị chọrọ bụ nwanyị na-na-elekọta anyị. Men chọrọ ndị inyom bụ ndị nwere a n'anya mmadụ.
Nke a nwere ihe ọ bụla na-eme na misbelief na anyị chọrọ ka a na-emeso dị ka eze a mmekọrịta. All anyị chọrọ bụ na-eche na nwa agbọghọ ahụ anyị na-ọnụ na eche banyere anyị n'ezie. Ọ bụrụ na e nwere otu ụdị nke nwa agbọghọ na-ọzọ bụ njikere ilekọta gị karịa ihe ọ bụla ọzọ girl, mgbe ahụ, ọ bụ otu nwa agbọghọ onye nwere nkịta.
Na-elekọta a nkịta na-achọ ọtụtụ oge na ndidi. M mgbe zutere otu nwaanyị bụ onye nwere nkịta ndị na-adịghị nwere a n'anya mmadụ. Jide n'aka na nwa agbọghọ na-ị ejedebe na a mmekọrịta chọrọ na-elekọta ndị ọzọ Nigeria, gụnyere gị.
Ọ bụ bụghị a n'ihe ndina nduku
M nnọọ omiiko banyere egwuregwu. M hụrụ n'anya na-aga jogging na na-na ikuku. N'ihi eziokwu na m enweghị mmasị na okodu ụbọchị nile n'ihu na telivishọn ka m vitamin D larịị ọkọkpọhi ala ala, M na-enweghị mmasị na ya na-akpa a n'ihe ndina nduku.
Ọ bụrụ na nwa agbọghọ ahụ na ị na-akpa nwere nkịta, ị pụrụ ịbụ nnọọ n'aka na ọ bụ ihe ọ bụla ma a umengwụ n'ihe ndina nduku. Ọ bụrụ na ị na-achọghị nwere nkịta poop nile n'ala, ị kwesịrị ị na-eje ije na gị nkịta dịkarịa ala ugboro abụọ a ụbọchị.
M ekwe nkwa na ị na a girl onye nwere nkịta kama na-etinye oge ya n'èzí ịbụ-arụsi ọrụ ike, kama imefusị oge ya na n'ihe ndina. Ọ bụ ezie na m na-ewesa m enyi nwanyị nkịta mgbe ọ na-adịghị akwụsị barking, M na-enwe ya mgbe anyị na-a ije na ya.
The Art na-achụ
Olee otú Bịakwute Women Ọ bụrụ na Ị na-eme ihere?
Ọ Right daa na ịhụnanya na-A di Man?
Leslie si Top Iri Aro nke Summer Doggie iwu oru